Tag: b2b qanacsanaanta macaamiisha | Martech Zone
Tag: b2b qanacsanaanta macaamiisha
Arbacada, Nofeembar 13, 2013 Arbacada, Nofeembar 13, 2013 Douglas Karr
Fahamka iyo lasocodka tayada khibradaada guud ee macaamiisha ayaa sii kordheysa dhib badan maxaa yeelay macaamiishaadu waxay taabanayaan qaybo badan oo kala duwan oo ururkaaga ah. Iyada oo suuqleyda ay adeegsanayaan barnaamijyada hogaaminta-iyo-xiriirka, aaladahaan macluumaad ee xaddidan ma ahan oo kaliya qaali iyo waxtar la'aan, laakiin waxay ka dhigi karaan wax aan macquul aheyn in aragti guud laga helo macaamiisha iyo khibradooda shirkaddaada. Kooxaha suuqgeynta ayaa si wax ku ool ah u fahmi kara arrimaha macaamiisha markay arki karaan midaysan
Inta badan kooxaha Suuqgeynta B2B waxay isu arkaan inay qorayaan soo jeedin (RFPs) iyo agab suuqgeyn ah oo ku jira Microsoft Word in ka badan iyo in ka badan. Marka ganacsigaagu bilaabo inuu kobco, waxaad ogaatay inaad dukumiinti ku hayso goobta oo dhan. Waxaan u adeegsanaa Google Docs dukumiintiyadayada macmiilka iyo iskaashiga. Waxaan u isticmaalnaa Tinderbox bakhaarka soo-jeedintayada. Tan iyo inta badan shirkadaha shirkaduhu waxay sii wadaan isticmaalka Microsoft Word si ay u qoraan dukumiintigooda… ma jirto hab fudud oo looga faa'iideysan karo